कहिल्यै १२ नबज्ने कस्तो घडी ? | NewsKarobar
गृहपृष्ठ कहिल्यै १२ नबज्ने कस्तो घडी ?
हामीलाई अचम्म लाग्न सक्छ, स्विट्जरल्यान्डको सोलोथर्न सहरमा यस्तो घडी छ, जसमा कहिले पनि १२ बज्दैन । त्यहाँको टाउन स्क्वायरमा राखिएको घडीमा १२ अंक नै छैन ।
मुख्य कारण त्यहाँका मानिसलाई ११ नम्बरलाई विशेष प्राथमिकता दिन्छन् । सोलोथर्न सहरमा चर्च र च्यापलहरू पनि ११‑११ वटा नै छन् । संग्रहालय, ऐतिहासिक झरना र टावर पनि ११ छन् । शताब्दियौं पुरानो मान्यताका कारण त्यहाँका मानिस ११ अंकप्रति विशेष लगाव राख्छन् ।
कुनै समयमा सोलोथर्न सहरका मानिस धेरै परिश्रम गर्थे तर उनीहरूको जीवनमा खुसी आएन । एक दिन त्यो सहरमा एल्फ (चामत्कारिक जीव) आए र मानिसलाई हौसला दिन थाले । जर्मन भाषामा एल्फको अर्थ ११ हुन्छ । त्यसपछि सोलोथर्नका मानिसले एल्फहरूलाई ११ सँग जोडे र त्यसलाई महत्त्व दिन थाले ।
एल्फ आएपछि उनीहरूको जीवनमा खुसियाली छाउन थाल्यो । त्यपछि उनीहरुले हरेक कुरालाई ११ नम्बरसँग जोड्न थालेका हुन् । यतिसम्म कि घडीको सुई पनि उनीहरूले ११ नम्बरसम्म मात्रै राखे ।
पछिल्लाे - अमिर दोङ र पुर्णिमा अभिनित ‘एला लीला’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
अघिल्लाे - मैदानमा अभ्यास गरिरहेका फुटबलरमाथि चट्याङ